प्रतिकूल बन्दै स्थिति - खेलकुद - साप्ताहिक
प्रतिकूल बन्दै स्थिति
जुन स्थितिको डर थियो, आखिर त्यही भयो । चार टिम सम्मिलित राउन्ड रोबिनका आधारमा हुने प्रतिस्पर्धाको सुरुवाती तीन लिग खेलमध्ये कुनै एकमा जित्न सकिएन भने गाह्रो हुन्छ । एसियाकप छनौटको तेस्रो चरणमा नेपालको स्थिति ठ्याक्कै त्यही भएको छ । नेपालसँगै फिलिपिन्स, यमन र ताजाकिस्तान सम्मिलित समूह ‘एफ’ को लिग चरण मध्यभागमा पुगेको छ अर्थात् सबै टिमले तीन–तीन खेल खेलेका छन् । त्यसमध्ये नेपाल मात्र यस्तो टिम हो, जसले अहिलेसम्म जित निकाल्न सकेको छैन ।
यसको अर्थ नेपाल समूहको पुछारमा छ र नेपालका लागि स्थिति प्रतिकूल छ ।
समूहको शीर्ष दुई स्थानमा रहने टिमले आउने एसियाकप खेल्नेछन्, तर नेपालको पहिलो दुई स्थानमा रहने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ । नेपालले यसै साता ताजाकिस्तानसँग उसकै घरमा प्रतिस्पर्धा गरेको थियो र नेपाल त्यसमा २–१ ले पराजित भएको थियो । फिलिपिन्सविरुद्धको पहिलो खेलमा पराजित नेपालले दोस्रो खेलमा भने यमनलाई बराबरीमा रोकेको थियो । समूहमा फिलिपिन्सको ७, यमनको ५ तथा यमनको ३ अंक छ ।
यो छनौटमा नेपाल १ अंकमै सीमित छ । नेपालको पछिल्लो हारअघि समूहमा सबैभन्दा कमजोर खेल प्रदर्शन गरिरहेको थियो, ताजाकिस्तानले । उक्त खेलअघि ताजाकिस्तान शून्य अंकमा थियो, लगातार दुई खेल गुमाएर । त्यसैले नेपालले आफ्नै मैदानमा हुने खेलमा ताजाकिस्तानविरुद्ध ३ अंक बटुल्ने अवसर थियो, तर यही स्थितिमा नेपालले कमजोर प्रदर्शन गर्‍यो । के त्यसो भए अब नेपालको छनौटको सम्भावना समाप्त भएको हो त ? यस विषयमा नेपाली प्रशिक्षक ग्योतुकु कोजी स्पष्ट रूपमा केही भन्न चाहँदैनन् ।
‘अझै यस्तै हो भन्ने स्थिति तयार भएको छैन, किनभने समूहमा भएका सबै टिम उस्तै–उस्तै छन्,’ प्रशिक्षक कोजीको दाबी छ । त्यसको अर्थ उनले नेपालको सम्भावना समाप्त भएको मानेका छैनन् । यो राम्रो पनि हो, तर यसका लागि नेपालले अबका बाँकी तीन खेलमा निकै उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ र एकपछि अर्को जित निकाल्नुपर्नेछ । के त्यसका लागि नेपाल तयार वा सक्षम छ ? यो अर्को प्रश्न हो, जसको स्पष्ट उत्तर भने प्रशिक्षक कोजीबाट अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
यति पक्का हो, अब एसियाकपमा नेपालको यात्रा सजिलो छैन । अब खेल्न बाँकी तीन खेलमध्ये नेपालले एउटै मात्र खेल घरेलु मैदानमा खेल्नेछ र त्यो फिलिपिन्सविरुद्ध हुनेछ । बाँकी अरू दुई खेलका लागि नेपालले यमन र ताजाकिस्तानको भ्रमण गर्नेछ । घरमा राम्रो नतिजा निकाल्न नसकेको स्थितिमा नेपालका लागि घर बाहिर स्पष्ट जित निकाल्न अझ गाह्रो हुने पक्का छ । सोलिडारिटीकप विजेताका रूपमा एसियाकप छनौट खेल्न पाएको नेपालका लागि अबका खेल निकै चुनौतीपूर्ण हुने तय छ ।